Vaovao - Fampahalalana momba ny indostria
Ho an'ny famokarana tampon-harafesina ao amin'ny faritry ny faritra misy ifandraisany amin'ny gazy mafana amin'ny boiler fanafanana vy, ny ampahany mifanitsy amin'ny bobongolo dia manipy amin'ny fanasana mainty izay misy singa mampangotraka, indrindra 40- Ferrosilicon 50%, izay mamadika ny faritry ny vy tsy mbola nohamafisina ho lasa hoditra manary-harafesina
Ny filàna fanaraha-maso ny akora dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny famokarana vy amin'ny rafitra greensand. Ny fasika silika fototra dia matetika no tsy raharahina amin'ny fifantohana lehibe amin'ny fanampiana bentonite. Ny additives an'ny karbaona dia azo heverina ho "ratsy ilaina" mba hiantohana ny famaranana tsara sy ny fihenan'ny lesoka ambonin'ny fasika mifandraika. Ny additives hafa dia ampiasaina rehefa tsy mahay mandanjalanja ny rafitra ary ireo kosa manampy fanampiny amin'ny toetoetran'ny rafitra greensand. Ho an'ny casting mitaky cores dia nanjary olana lehibe kokoa izy io satria maro ny rafitra resin samy hafa ampiasaina amin'ny famokarana fototra ary tsy maintsy dinihina ireo rehefa mifehy ny haavon'ny karbaona sy ny famafazana ny rafitra fasika.
Ny vokany kambana amin'ny karbaona fanampiny sy ny fahaverezan'ny fanapoahana ary ny fananganana fasika amin'ny ankapobeny dia mila fahatakarana sy fifehezana. Ny fomba fanaraha-maso isan-karazany dia dinihina ao anatin'izany ny fomba nentim-paharazana toy ny volatiles sy ny fatiantoka-on-ignition miaraka amin'ny fomba famaritana bentonite sy ny fomba fanoratana. Ny fomba fanaraha-maso vaovao kokoa toy ny karbaona manontolo dia averina dinihina miaraka amin'ny fonosana amin'ny ankapobeny ny fomba fitiliana sy fifehezana.
Ny fomba faminaniana isan-karazany dia jerena ho fanaraha-maso ihany koa. Nasongadinana ny kalitaon'ny additives sy ny anjara toerany ary ny zava-dehibe kokoa ny fifandraisan'izy ireo, satria faritra iray tsy raharahiana izany matetika satria miady ho amin'ny fahombiazana ny filan'ny mpanorina vy. Ny fanandramana fanaraha-maso ho avy izay aroso dia resahina miaraka amin'ny fanampiana ao amin'ny mixer.
Nodinihina ihany koa ny fandikana ny valiny sy ny hetsika takiana mba hiantohana ny fanaraha-maso sy ny zava-dehibe kokoa ny fandefasana kalitao mifanaraka amin'ny rafitra greensand miaraka amin'ny fanamafisana ny fahatakarana sy ny fifehezana ny additive karbonika amin'ny fampisehoana casting.